Mohamed Yare – Shacabka News
Author: Mohamed Yare
Cadeyn: Imaaraadka Carabta oo looga badiyay Tartanka Qatar ay kula jirto hanashada Somaaliya
Wasiirka Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ku sugan dalka Qatar ayaa kulan la qaatay Xoghayaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dalkaasi.
Labadda masuul ayaa kulan kooda kadib ka dooday, siddii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dalka iyo siidii Dowladda Qatar ay uga taageeri lahayd Soomaaliya Mashaariic Horumarineed oo laga fuliyo Gudaha dalka.
Dowldda Qatar ayaa ka mid ah Dowladaha xiriirka dhow la leh DFS, iyadoona ka taageerta dhinacyada Arrimaha Bani’aadanimada, Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Dhawaan ayay ahayd markii Qatar ay u ballan qaaday Soomaaliya 200 Million oo Doller, taas oo wax looga qabanayo Wadooyinka ku burburay colaadihii iyo dagaalladii Sokeeye ee soo maray dalka.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Cadeyn: Imaaraadka Carabta oo looga badiyay Tartanka Qatar ay kula jirto hanashada Somaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Issimada Puntland- (SAWIRO).
Isimada iyo duubabka dhaqanka ee Gobolka Nugaal ayaa kulan soo dhaweyn ah u sameeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga la socda.
Kulankan oo lagu qabtay Xarunta Dhaqanka ee Hiddo Raac ee magaalada Garoowe ayaa waxaa casuumaadiisa fidiyay Isimo ay hormuud u yihiin Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaaliya mudane Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay duubabka dhaqanka kaalinta muuqata ee ay ku leeyihiin nabadeynta iyo isu soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed, isaga oo kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan hawlaha dib u heshiisiinta.
Madaxweynaha ayaa inta uu safarka ku joogo Gobollada Puntland waxa uu wadatashiyo la yeelan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool Puntland.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Issimada Puntland- (SAWIRO).
Isku Socodkii Gaadiidka Dad-weynaha ee Puntland iyo Somaliland oo la Hakiyey.
Puntland ayaa ku dhowaaqay in ay hakisay isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee deegaannada maamulkaasi iyo kuwa Somaliland.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne, ayaa u sheegay warbaahinta in gabi ahaanba la joojiyey isku socodkii Labada dhinac.
Waxa uu tilmaamay guddoomiyaha in si kooban loo ogol yahay iney socdaan gaadiidka mas’uuliyiinta maamulkooda iyo sidoo kale kuwa ciidamada.
Sidoo kale, guddoomiye Faraweyne ayaa sheegay in dadka kasoo jeeda deegaannada Somaliland ay si nabad ah ku joogi karaan Puntland, balse aan la aqbali doonin in ammarkooda la jabiyo.
“Waxaa la joojiyey wax walbo oo gaadiid ah oo u socda gobollada isku magacaabay Somaliland ama waqooyi Soomaaliya, ma rabno iney dhibaato gaarto dad Soomaaliyeed oo safar soo galay, kaliya waxaa la ogol yahay gaadiidka mas’uuliyiinta iyo kuwa ciidamada, sababtana waa la wada ogyahay”
Ayuu yiri guddoomiyaha.
Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa ku dagaallamaya deegaanno ka tirsan Gobolka Sool.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Isku Socodkii Gaadiidka Dad-weynaha ee Puntland iyo Somaliland oo la Hakiyey.